दिनभरका समाचारः बुहारीको विहेदेखि बलात्कारको भिडियो देखाएर पैसा मागसम्म | Kendrabindu Nepal Online News
२ मंसिर २०७५, आईतवार १८:०५
देश विदेशमा आज थुप्रै सकारात्मक तथा नकारात्मक घटना परिघटनाहरु भए । ति घटनाक्रमहरुलाई हामीले केन्द्रबिन्दु डटकम र केन्द्रबिन्दुको युट्युब च्यानल मार्फत निरन्तर पलपलमा अपडेट गर्यौ। यसरी अपडेट भएका अनेकौ समाचारहरु मध्ये प्रमुख समाचारहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौ। हाइलाइट गरिएको शिर्षकहरुमा क्लिक गरेर बिस्तृत समाचार पढ्न सक्नु हुन्छ ।
विराटनगरमा तीन कोइरालालाई एउटै माला, कांग्रेसको साख फर्काउने दाबी
विराटनगरमा नेपाली कांग्रेसका तीन कोइरालालाई एउटै माला लगाईएको छ । पछिल्लो समय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका तिनै कोइरालालाई एउटै माला लगाईएको हो । गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बीपी पुत्र डा. शसांक, गिरिजापुत्री सुजाता र नोनापुत्र डा. शेखरलाई एउटै माला लगाईएको हो ।
ललितपुर महानगरपालिकाले सडकमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान गर्ने
ललितपुर महानगरपालिकाले सहरका मुख्य–मुख्य सडकमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान गर्ने तयारी गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले महानगर भित्रको मुख्य–मुख्य सडकमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिए । १३ औं महानगरीय प्रहरी दिवसको अवसर पारेर आईतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीलाई सघाउ पु¥याउन महानगरपालिकाले सिसीटिभी क्यामेरा सडकमा जडान गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि स्पष्ट पारे ।
आजदेखि पोखरा विमानस्थल दैनिक १५ घण्टा बन्द
मर्मतका लागि भन्दै पोखरा विमानस्थल आजदेखि दैनिक १५ घण्टा बन्द हुनेछ । पोखरा विमानस्थलको धावनमार्गको मर्मतका लागि दैनिक १५ घण्टा विमानस्थल बन्द गरिएको हो । धावनमार्गमा ठाउँमा चर्किने र गिटीहरू उप्किन सुरू भएपछि मर्मत गर्न लागेको हो । आजदेखि दिउँसो ३ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म विमानस्थल मर्मतका लागि बन्द गरिएको पोखरा विमानस्थलका निर्देशक भोलाप्रसाद गुरागाईंले जानकारी दिए।
छोराको निधनपछि पूर्वउपसभामुख सुवेदीले गरिदिइन् बुहारीको बिहे
सङ्घीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति तथा संविधानसभाका पूर्वउपसभामुख पूर्णाकुमारी सुवेदी र नेकपाका नेता प्रकाश सुवेदीले जेठी बुहारी मालती शर्मालाई छोरीको रूपमा विवाह गरी अन्माएर पठाएका छन् ।
एक महिलामाथि सामूहिक बलात्कार, भिडियो देखाएर पैसाको बार्गेनिङ
वीरगन्जकी एक ४० वर्षीया दलित महिलामाथि सामूहिक बलात्कार गरिएको छ । चार युवाले गत कात्तिक ५ गते उनको बलात्कार गरेर त्यसको भिडियोसमेत बनाएका थिए । बलात्कार गर्नेहरुले भिडियो देखाएर पीडित महिलासँग रकम माग्ने गरेको थिए । राति १० बजेतिर शौच गर्न खेतमा गएका बेला उनलाई ३५ बर्से मनोज साह तेली, ३० बर्से कृष्ण साह र २४ बर्से दिलिप सहनीले बलात्कार गरेका थिए । बलात्कार गरेको भिडियो ३५ बर्से आकाश साहले मोबाइलमा भिडियो खिचेका थिए।
एक नारायण भण्डारी भन्छन्, ‘मेरा गीत किन्नेहरुको भीड लाग्छ’ (भिडियो)
पछिल्लो पुस्तामा सबैले चिनेको नाम हो एक नारायण भण्डारी । जसका दर्जनौ भन्दा धेरै गीतहरुले बजार खाएका छन् । जसमा जीवन संघर्ष, माया प्रेम र यथार्थ भोगाइका पलहरुलाई समेटिएको छ । एक नारायण भण्डारीले प्रेममा पागल भएकाहरुको भावनामा डुबेर बिछोडको पीडाको अनुभूत गर्छन् । अनि लेख्छन्, वियोगको पीडामा छट्पटाइरहेकाका नव यौवनाहरुका कथाब्यथाहरु । पागल प्रेमीहरुको अनुभव अरुबाट बटुलेर त्यही भावनामा समेटिएका गीतलाई हिट् बनाउँछन्।
headline, kendrabindu, news
Prevहस्तकला मेलाबाट व्यवसायीहरु उत्साहित
नेहा धुपिया विवाह गरेको ६ महिनामै आमा बनिन्Next